Novemba 2018 | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Novemba 2018
Isikhathi sokufunda: 2 amaminithi Ingabe ufuna ukuvakashela Norway? Izivakashi eziningi eYurophu uthole isitimela sokuvakasha nemnandi zikanokusho. Uyazi ukuthi kungani? Lokhu kukunika ukufinyelela umbono panoramic, kukusa Dreamland nezwe elingokoqobo. Cabanga lapha ezinye zezinto okufanele wazi ngenkathi…